Abenzi be-Passive DWDM | I-China Passive DWDM Factory & Abahlinzeki
I-HUA-NET inikeza uhla oluphelele lwemikhiqizo ye-Thermal / Athermal AWG, kufaka phakathi i-50GHz, 100GHz ne-200GHz Thermal / Athermal AWG. Lapha sethula ukucaciswa okujwayelekile kwe-41-channel 100GHz Gaussian Athermal AWG (41 channel AAWG) MUX / DEMUX nto enikeziwe ukuze isetshenziswe ohlelweni lwe-DWDM.
I-Athermal AWG (i-AAWG) inokusebenza okulingana ne-Thermal AWG ejwayelekile (TAWG) kepha ayidingi mandla kagesi okuzinza. Zingasetshenziswa njengokufaka esikhundleni esiqondile se-Thin Film Filters (Imodyuli yohlobo lwe-Filter module ye-DWDM) yamacala lapho kungekho mandla atholakalayo, futhi efanelekile nezinhlelo zokusebenza zangaphandle ngaphezulu kwe-30 kuya ku- + 70 degree kumanethiwekhi wokufinyelela. I-HUA-NET's Athermal AWG (AAWG) inikezela ngokusebenza okuhle kakhulu kwe-optical, ukuthembeka okuphezulu, ukuthambeka kokuphathwa kwefayibha nesisombululo sokonga amandla kwiphakeji ehambisanayo. Izindwangu ezahlukahlukene zokufaka nezokukhipha, njenge-SM fibers, MM fibers kanye ne-PM fiber zingakhethwa ukuhlangabezana nezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene. Futhi singanikela ngamaphakeji wemikhiqizo ehlukile, kufaka phakathi ibhokisi lensimbi elikhethekile kanye ne-19 ”1U rackmount.
Izingxenye ze-planar DWDM (Thermal / Athermal AWG) ezivela ku-HUA-NET zikulungele ngokuphelele ngokuya ngezidingo zokuqinisekisa ukuthembeka kweTelcordia zezinto ze-fiber optic nezakhi ze-opto-elektroniki (GR-1221-CORE / UNC, Izidingo Zesiqiniseko Sokwethenjelwa Okujwayelekile ze-Fiber Optic Branching Components, kanye neTelcordia TR-NWT-000468, Imikhuba Yokuqinisekisa Ukuthembeka Kwamadivayisi e-Opto-electronic).
I-100G DWDM MODULE (4,8,16 ISITESHI)
I-HUA-NET I-Dense wavelength division multiplexer (DWDM) isebenzisa ubuchwepheshe obuncane bokumboza ifilimu nokuklama okuphathelene nokufakwa kwe-non-flux metalbonding micro optics ukufezekisa ukungezwa kwe-optical nokudonsa kuma-ITUwavelengths. Inikeza ubude besikhungo sesiteshi se-ITU, ukulahleka kokufakwa okuphansi, ukuhlukaniswa kwesiteshi okuphezulu, ibhendi ebanzi yokudlula, ukuzwela kokushisa okuphansi kanye nendlela ye-epoxyfree optical. Ingasetshenziselwa ukwengezwa / ukwehla kwe-wavelength ku-telecommunicationnetwork system.
Incazelo: 200G DWDM MODULE (4, 8, 16 CHANNEL)
I-HUA-NET I-200GHz dense wavelength division multiplexer (DWDM) isebenzisa ubuchwepheshe obuncane bokumboza ifilimu nokuklama okuphathelene nokufakwa kwensimbi okungahlanganisi insimbi okuhlanganisa ukufakela ukwengeza nokudonsa kuma-wavelengths we-ITU. Inikela ngobude besikhungo sesiteshi se-ITU, ukulahleka kokufakwa okuphansi, ukuhlukaniswa kwesiteshi okuphezulu, ibhendi ebanzi yokudlula, ukuzwela kokushisa okuphansi kanye nendlela ye-epoxy yamahhala. Ingasetshenziselwa ukwengezwa / ukwehla kwe-wavelength ohlelweni lwenethiwekhi yezokuxhumana.
I-HUA-NET I-Dense wavelength division multiplexer (DWDM) isebenzisa ubuchwepheshe obunamathelayo be-thinfilm kanye nedizayini yokuphathelene nokufakwa kwephakheji ye-microoptics yensimbi engeyona eye-flux ukufeza ukungezwa kwe-optical nokuphonsa kuma-wavelengths we-ITU. Itprovides ITU channel center wavelength, low insertion loss, high channelisolation, wide pass band, low temperature sensitivity and epoxy free opticalpath. Ingasetshenziselwa ukwengeza / ukwehla kobude be-wavelength.
I-Xfp Transceiver, Optical Fibre Module, IHuawei Qsfp +, I-Sfp C ++, Intengo ye-Huawei Olt, Transmitter Wangaphandle Transmitter,